Umakhi weakhawunti yeFortnite 2020: Uzifumana njani iZikhumba zasimahla kunye nokuPasa kweMfazwe kwiFortnite?
Ngokwenyani & Mahala V amaBucks Akukho siQinisekiso soLuntu!
Uchithe iiyure ezininzi ezibuhlungu phambi kwesikrini sekhompyuter ukhangela indawo eqinileyo Fortnite V Bucks Generator? Ngokuqinisekileyo ngokwaneleyo, usenokuba awuzonwabelanga ubuninzi bayo. Kodwa ke, kubonakala ngathi uluhlobo lomntu onganikezeli ngokulula. Ngokuchulumancisayo ngokwaneleyo, sele uza kuvuzwa ngokunyamezela kwakho. Kuko oko! Yintoni oyibonayo phambi kwakho yeyona nto intle yeVennite V yeebhokisi ze-Bucks onokuzifumana ngeenxa zonke. Kusimahla, kuyakhawuleza, kwaye kunokuthenjwa njengesihogo. Ngcono, le nguqulo ehlaziyiweyo ye I-Fortnite V Bucks generator akukho kuqinisekiswa komntu Isixhobo sinokuvelisa kakhulu i-Fortnite V Bucks. Ewe, esi sixhobo sinokuvula imilambo yeenkukhu ngesilinganiselo esingenamkhawulo samahhala e-Fortnite V Buck ngaphandle kokuphonsa ingalo kunye nomlenze. Ukufumana izibonelelo, kufuneka ufake inombolo ethandwayo yeeVucks, emva koko ulinde ukuba kwenzeke. Ngokukrakra, awungekhe ufumane lula, ngaphandle kwengozi, kwaye ngokukhawuleza i-Fortnite V Bucks generator kule mihla nakwixesha. Ungayichazanga eyokuba awuzukuthatha uphando oluvavayo njengelorhwebo lokuya kwiiBucks zasimahla zeVen. Oku I-Fortnite V Bucks generator ayikho kuvavanyo Isixhobo asizukubiza mali nokuba. Njengoko unokuxela, iziqinisekiso zokusebenzisa i-generator azikho kwaphela. Yintoni enye onokuyilindela kumvelisi wolu hlobo? Ngokusisiseko, akukho ndlela unokufumana ngayo iimvakalelo zakho ngokuthatha umfanekiso kule generator. Ngapha koko, uya kuba ngumcebisi wenkunkuma. Ukuba akunjalo, ubuncinci uza kuba ngumthengi obuyayo!
Le yeyona jenisi yakutshanje ehlaziyiweyo kwimarike. Ngokungafaniyo nezinye izixhobo ezifanayo, le generator iyakwazi ukuhambisa inani elingenamkhawulo lwemali yenhlanhla. Ke, awungqiniswanga ubungakanani, nto leyo eyahlula le generator imangalisayo ekuphumleni kwepakethe. Ngokusisiseko, ubopheleleke ukufumana ngaphezulu kwe-Fortnite V bucks kwesi sixhobo kunaso nasiphi na esinye isixhobo esilinganayo sangaphandle, esikuvumela ukuba ukonwabele kwaye uwuphathe kakuhle umdlalo kunangaphambili. Kuyolisa njani oko? Ke, unokuphumla kwaye uvune imbuyekezo ngaphandle kokuthatha uxinzelelo. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, awunaxesha lokuchitha. Ngokukhethekileyo, olu tshintsho lutsha lwe Ii-Bucks zasimahla Akukho Venisi yokuqinisekisa yoLuntu yibhombu. Ngokutsho kwabaphuhlisi, lenzelwe bonke abadlali abadlala ngokungekho mdla wokuphosa imali ukuze bathenge iipasile zokulwa, iidlakudla, iimvakalelo, kunye nokunye ukuphanga okuza nethegi yexabiso. Ngamazwi ophuhlisi, "Siyazi ukuba kubuhlungu ukusebenzisa imali yethu esiyisebenzele nzima kwizinto ezinjalo, ke we ndicinge ngokudala lo mvelisi ongenakuhlawulisa namnye imali. ” Ukuthetha ngokunyanisekileyo, abaphuhlisi baye babethelela ngokuyila, banceda abanye kule nkqubo. Enkosi ngokuyilwa kwabo, bonke abadlali banokuba nemali eninzi kwi-wallet yabo. Emva kwayo yonke loo nto, ngekhe bachithe eyabo imali kwimali yomdlalo. Elona candelo lililo kukuba umvelisi ufumaneka ngokubanzi kubo bonke.